အလှဆုံး Palaces ဥရောပတိုက်တွင် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အလှဆုံး Palaces ဥရောပတိုက်တွင်
အလှဆုံး Palaces ဥရောပတိုက်တွင်
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ဥရောပခရီးသွား
ဥရောပတိုက်တွင်အတော်များများကမြို့ကြီးများလှပတဲ့နန်းတော်ရှိ (သို့မဟုတ်နှစ်ဦး) ထဲမှာဆွဲရန် ခရီးသွားဧည့်. ဒါကြောင့်ဥရောပအတွင်းငါးအလှဆုံးဘုံဗိမာန်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသဘောတူရန်ခက်ခဲမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်. ဥရောပမှာတော့အလှဆုံး Palace ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးမှာကြည့်ကြပါစို့:
1. ဥရောပနှင့်ပြင်သစ် Chateau de ဗာဆိုင်းအတွက်လှပသော Palace
ဗာဆိုင်းဖြစ်ကောင်းအကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ် ရဲတိုက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ, ထိုသို့ဆက်ဆက်ဂုဏ်သတင်းကိုထိုက်. ဒါဟာ 18 ရာစုပြင်သစ်တစ်ဦးရတနာရဲ့ အတတ်ပညာ, ခမ်းနားထည်ဝါခြင်းနှင့်အနုပညာလက်ရာများနှင့်အလှအပကြွယ်ဝ.
ဒါဟာနာမည်ကျော်ပြင်သစ်အုပ်စိုးသောမင်းများကချဲ့ထွင်ခဲ့သည် လူးဝစ် XIV, အဘယ်သူသည်ဗာဆိုင်းအတွက်မှတရားရုံးနှင့်အစိုးရနှစ်ခုလုံးကိုပြောင်းရွှေ့ 1682. အဆိုပါ chateau အာဏာဗဟိုရာအရပျခဲ့ ပြင်သစ် အတွက်တော်လှန်ရေးသည်အထိ 1789. အခုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးခရီးသွားဧည့်သောနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
2. ဝင်ဆာရဲတိုက်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
ဝင်ဆာတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်နန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဥရောပထဲမှာအများဆုံးလှပ Palace တို့တွင်, နေဆဲရှိကြောင်းကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာရဲတိုက် ဒေသခံများက. ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးဝင်ဆာအတွက်သူမ၏ပုဂ္ဂလိကနင်္ဂနွေသုံးစွဲ.
ဝင်ဆာရဲတိုက်၏သမိုင်းနီးပါးဖြစ်ပါသည် 1000 နှစ်ပေါင်းတာရှည်. ရာစုနှစ်ကျော်, ဒါကြောင့်ဗြိတိန်မူပိုင်များစွာသောကျော်ကြားအဖွဲ့ဝင်များ၏အိမျခဲ့သည်. အဆိုပါရဲတိုက်ပါဝင်သည် စိန့်. ဂျော့ခ်ျရဲ့ Chapel, တကျိပ်ဧကရာဇ်၏သင်္ချိုင်း site ကို, နှင့်ပြည်နယ်တိုက်ခန်းတော်ဝင်ငွေကောက်ခံဘဏ္ဍာကိုအတူဖြည်းဆည်းနေကြသည်.
3. လူဇင်ဘတ်၏ရန်း Ducal နန်းတော်
၏က Grand Ducal နန်းတော် လူဇင်ဘတ် လူဇင်ဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့က Grand Duke ၏တရားဝင်နေထိုင်ဖြစ်ပါသည်. သူကသူ့အရာရှိတဦးကလုပ်ငန်းဆောင်တာအများစုတို့အတွက်အသုံးပြု, ယင်းက Grand Duchess များနှင့်အတူ. နန်းတော်မှာလည်းသူတို့၏ရုံးခန်းများပါရှိသည်, အဖြစ် staterooms.
အထဲတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဆောက်အဦးပထမဦးဆုံးမြို့တော်ခန်းမအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် 1572. တွင် 1817, ထိုသို့ဘုရင်ခံ၏တရားဝင်နေထိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်. The Grand Ducal နန်းတော်အဆိုပါ Flemish Renaissance စတိုင် resplendent ကြည့်ခြင်းနှင့်ကဥရောပတိုက်တွင်အများစုမှာတင့်တယ် Palace ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရငျးတှငျအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာမြို့ထဲတွင်အလှဆုံးမျက်နှာစာ၏တဦးတည်းရှိတယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွင်းပိုင်းအဖြစ်.
4. Neuschwanstein ရဲတိုက်, ဂျာမနီ
Neuschwanstein ယင်း၏ရှိနေသော်ငြားလည်းဥရောပတိုက်တွင်အလှဆုံးဘုံဗိမာန်ကြားတွင်နေရာမှထိုက်တန်ပါတယ် idyllic setting ကို နှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဗိသုကာ. က လာ. , နည်းတူဤရဲတိုက်ကိုကြည့်ရှု ဖြောင့်နေတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်-ပုံပြင်ထဲက. တကယ်တော့, ဒါကြောင့်အတွင်းရဲတိုက်ဘို့လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည် ဒစ္စနေးရဲ့အိပ်အလှအပ.
ဒါဟာ 19 ရာစု Romanesque Revival နန်းတော်ရဲ့. ကမ္ဘာတဝှမ်းအနုပညာသမိုင်းပညာရှင်ကယဉျကြေးမှု၏သင်္ကေတ၏တဦးတည်းစဉ်းစားပါ. ရှငျဘုရငျက Ludwig II ကို B က၏တစ်ဦးvaria ၌သူ၏ဆုတ်ခွာနေအဖြစ် Neuschwanstein built 1837. အတွက်ဘုရင့်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် 1886, အများပြည်သူပွင့်လင်းကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်.
ရထား Fuessen မှ Ulm
ရထား Fuessen မှမြူးနစ်
ရထား Fuessen မှစတုဂတ်
ရထား Fuessen မှ Nuremberg
5. ဥရောပနှင့်သြစတြီးယားအတွက်လှပသော Palace – Schloss Schonbrunn
ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုမြင်ကွင်းများနှင့်အများဆုံးလှပ Palace တစ်ခုမှာဗီယင်နာ၌တည်ရှိ၏, သြစတြီးယား, Schonbrunn ကိုလည်းကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် site ကိုဖြစ်ပါတယ်. နန်းတော်ဧကရာဇ် Leopold ငါအဘို့အမဲလိုက်အိပ်အဖြစ်စတင်. ဒါဟာ 17 ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့. Schonbrunn ဗိသုကာ Bernhard Fischer ဗွန် Erlach ၏အကောင်းဆုံးလက်ရာများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ထိုကတည်းက, Schonbrunn လည်းမာရီယာထရီဇာ၏တရားရုံးအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုမမြင်စဖူး, အရာပြီးနောက်ကပြည်နယ်များ၏ရေးရာဗဟိုအချက်နှင့်အိမ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်. Baroque စတိုင် built-in, နန်းတော်အများအားဖြင့်မူရင်းအခွအေနေထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်. ၎င်း၏ထူးခြားသောဗိသုကာကြောင့်ဥရောပတိုက်တွင်သွားရောက်အရှိဆုံးဗဒေသောနေရာများထဲကတစ်ခုစေသည်.
သငျသညျဥရောပမှာရှိတဲ့ငါးအလှဆုံးဘုံဗိမာန်န်းကျင်ကသင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့အဆင်သင့်တယ်ဆိုရင်, ထိုအသငျသညျလက်လွတ်မနိုင်သောနေရာများဖြစ်ကြသည်. ဤအနေရာများအားလုံးသည်ရထားကနေတဆင့်အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-palaces-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / es သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / က de ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#amazingplaces #chateua #WindsorCastle လူဇင်ဘတ်
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား